ဧရာဝတီတိုငျး CDM ရဲတပျဖှဲ့က တိုကျပှဲစဖျော၊ ယာဉျထိနျးရဲ နှဈဦး သဆေုံး – Network Media Group
ဧရာဝတီတိုငျးမှ CDM ရဲမြားနှငျ့ ဖှဲ့စညျးထားသညျ CDM Police Defence Force (Ayeyarwaddy) သညျ တိုငျးရဲ တပျဖှဲ့မှူး အိမျရှေ့ လမျးတဈဘကျရှိ မွကြှနျးသာမီးပှိုငျ့ ယာဉျထိနျးရဲရုံးကို ပဈခတျ တိုကျခိုကျခွငျးဖွငျ့ တိုကျပှဲစတငျ ဖျောဆောငျခဲ့ရာ ရဲနှဈဦးသဆေုံးခဲ့သညျဟု ဒသေခံမြားက အတညျပွု ပွောသညျ။
အောကျတိုဘာ ၂၈ ရကျနေ့ နံနကျ ၁၁ နာရီခှဲ အခြိနျတှငျ ပုသိမျ အနောကျ ပွညျသူ့ ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့ (P.W. D.F) တို့ ပူးပေါငျးကာ မဟာဗန်ဓုလ လမျးမကွီးရှိ တိုငျးရဲတပျရငျးနှငျ့ မီတာ ၂၀၀ ကြျောခနျ့ အကှာရှိ မွကြှနျးသာ ယာဉျ ထိနျးရဲရုံးကို ပဈမှတျထား တိုကျခိုကျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟု ပုသိမျပွောကျကြားတပျဖှဲ့က သတငျးထုတျပွနျထားသညျ။
“ဖောငျး ဖောငျး ဖောငျး ဆိုပွီး သနေတျသံ ၁၀ ခကျြ လောကျကွားရတယျ။ မျောတျောပီကယျ နှဈယောကျသေ သှားတယျ” ဟု ယငျးလမျးအတှငျး နထေိုငျသူ တဈဦး က ပွောသညျ။
ပွညျသူမြားထံက အဓမ်မ ငှတေောငျးကာ အနှောကျအယှကျ ပွုနသေညျ့ ယာဉျထိနျးရဲ ၂ ဦး ရှိနသေညျ့ အတှကျ ထို မွကြှနျးသာမီးပှိုငျ့ ယာဉျထိနျးရဲရုံးကို ပဈမှတျထားပွီး တိုကျခိုကျရခွငျး ဖွဈသညျဟု ပုသိမျ ပွောကျကြား တပျဖှဲ့ က ပွောသညျ။
မွကြှနျးသာမီးပှိုငျ့တှငျ ရှိနသေညျ့ ယာဉျထိနျးရဲ တပျကွပျ ဇျောမငျးထကျ(မိုးညို)နှငျ့ ယာဉျထိနျးရဲ မွတျမငျးဦး (မိုးကောငျး) တို့ သဆေုံးသှားသညျဟုလညျး ရဲမှုခငျး သတငျးထောကျမြား က အတညျပွု ပွောဆိုသညျ။
မျောတျောပီကယျ၊ စရဖ၊ SB ၊ နယျထိနျး နှငျ့ စညျပငျသာယာ ဝနျထမျး အခြို့က ဒသေခံမြားကို အနိုငျကငျြ့ပွီး ငှညှေဈနကွေကွောငျး၊ EPC လြှပျစဈရုံးဝနျထမျးမြားကလညျး မီတာခမြားကို အဆမတနျ တိုးမွငျ့ကောကျ ခံ နေ သညျဟု ဒသေခံ အခြို့က ပွောသညျ။
ယခုလုပျဆောငျမှုသညျ စဈကောငျစီက အာဏာသိမျးပွီးနောကျ ဧရာဝတီတိုငျးအတှငျး၌ CDM ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားက စဈကောငျစီ လကျအောကျခံ ရဲမြားကို ပထမဆုံးအကွိမျ ပဈခတျ တိုကျခိုကျခွငျးဖွငျ့ တိုကျပှဲ ဖျောဆောငျလိုကျ ခွငျး ဖွဈသညျ ဟု ဒသေခံမြားက ဆိုသညျ။
ဧရာဝတီတိုင်း CDM ရဲတပ်ဖွဲ့က တိုက်ပွဲစဖော်၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ နှစ်ဦး သေဆုံး
ဧရာဝတီတိုင်းမှ CDM ရဲများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည် CDM Police Defence Force (Ayeyarwaddy) သည် တိုင်းရဲ တပ်ဖွဲ့မှူး အိမ်ရှေ့ လမ်းတစ်ဘက်ရှိ မြကျွန်းသာမီးပွိုင့် ယာဉ်ထိန်းရဲရုံးကို ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် တိုက်ပွဲစတင် ဖော်ဆောင်ခဲ့ရာ ရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများက အတည်ပြု ပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲ အချိန်တွင် ပုသိမ် အနောက် ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (P.W. D.F) တို့ ပူးပေါင်းကာ မဟာဗန္ဓုလ လမ်းမကြီးရှိ တိုင်းရဲတပ်ရင်းနှင့် မီတာ ၂၀၀ ကျော်ခန့် အကွာရှိ မြကျွန်းသာ ယာဉ် ထိန်းရဲရုံးကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပုသိမ်ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
“ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း ဆိုပြီး သေနတ်သံ ၁၀ ချက် လောက်ကြားရတယ်။ မော်တော်ပီကယ် နှစ်ယောက်သေ သွားတယ်” ဟု ယင်းလမ်းအတွင်း နေထိုင်သူ တစ်ဦး က ပြောသည်။
ပြည်သူများထံက အဓမ္မ ငွေတောင်းကာ အနှောက်အယှက် ပြုနေသည့် ယာဉ်ထိန်းရဲ ၂ ဦး ရှိနေသည့် အတွက် ထို မြကျွန်းသာမီးပွိုင့် ယာဉ်ထိန်းရဲရုံးကို ပစ်မှတ်ထားပြီး တိုက်ခိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပုသိမ် ပြောက်ကျား တပ်ဖွဲ့ က ပြောသည်။
မြကျွန်းသာမီးပွိုင့်တွင် ရှိနေသည့် ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ကြပ် ဇော်မင်းထက်(မိုးညို)နှင့် ယာဉ်ထိန်းရဲ မြတ်မင်းဦး (မိုးကောင်း) တို့ သေဆုံးသွားသည်ဟုလည်း ရဲမှုခင်း သတင်းထောက်များ က အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။
မော်တော်ပီကယ်၊ စရဖ၊ SB ၊ နယ်ထိန်း နှင့် စည်ပင်သာယာ ဝန်ထမ်း အချို့က ဒေသခံများကို အနိုင်ကျင့်ပြီး ငွေညှစ်နေကြကြောင်း၊ EPC လျှပ်စစ်ရုံးဝန်ထမ်းများကလည်း မီတာခများကို အဆမတန် တိုးမြင့်ကောက် ခံ နေ သည်ဟု ဒေသခံ အချို့က ပြောသည်။
ယခုလုပ်ဆောင်မှုသည် စစ်ကောင်စီက အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း၌ CDM ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက စစ်ကောင်စီ လက်အောက်ခံ ရဲများကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် တိုက်ပွဲ ဖော်ဆောင်လိုက် ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ဒေသခံများက ဆိုသည်။
ပေါငျ ကွံ့ခိုငျဖှံ့ဖွိုးရေး ဥက်ကဌ နအေိမျတှငျ ဗုံးကှဲ